कांग्रेसका प्रवक्ता शर्मा दुई साताका लागि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग | ईमाउण्टेन समाचार
कांग्रेसका प्रवक्ता शर्मा दुई साताका लागि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुई साताका लागि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुने बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवक्ता शर्माले अस्वस्ताका कारण प्रवक्ताको सक्रिय जिम्मेवारीबाट टाढा हुनुपरेकोमा क्षमा मागेका छन् ।
अस्वस्थताका कारण दुइ साताकालागि प्रवक्ताको सकृय जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको छु ! मिडिया, पार्टी र शुभचिन्तकहरुसंग क्षमा चाहन्छु !
चांडैनै पुर्ण स्वस्थ भएर पुर्ण जांगर साथ मैदानमा फर्किनेछु l विभिन्न माध्यमबाट शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबै मित्रप्रति हृदयले आभारी छु l धन्यवाद !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 4, 2021
विश्वप्रकाशले लेखेका छन् – ‘अस्वस्थताका कारण दुई साताका लागि प्रवक्ताको सकृय जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको छु । प्रेस, पार्टी र शुभचिन्तकहरुसँंग क्षमा चाहन्छु ।’
कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका प्रवक्ता शर्माले स्वस्थ भएर छिट्टै नै मैदानमा फर्किने जानकारी गराएका छन् । उनले भने –‘चाँडैनै पुर्ण स्वस्थ भएर पुर्ण जांगर साथ मैदानमा फर्किनेछु । विभिन्न माध्यमबाट शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबै मित्रप्रति हृदयले आभारी छु ।’
राजनीति‐मा वर्गिकृतBishwaPrakashSharma, NepaliCongress
राष्ट्रपतिद्वारा ७ अध्यादेश जारी, फेरि ल्याइयो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
नेकपाको नयाँ प्रवक्तामा प्रदिप ज्ञावली
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता फेरिए
सरकारले मन्त्री हेरफेर बाहेक अरु केही गर्न सकेन : विश्वप्रकाश
नेपाली कांग्रेस सरकार गठनका लागि गणित पर्खदैं : विश्वप्रकास शर्मा